Warshada mashiinka caatada ah - Shiinaha Mashiinnada Slimming Soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha
Ems wuxuu sawiraa Jidhka Isku-xidhka Muruqyada Jidhka xooggan ee Mashiinka wax lagu khafiifiyo
Epinephrine oo la sii daayay ayaa calaamad u ah unugyada baruurta si ay u bilaabaan lipolysis.Dufanka lagu kaydiyo qaabka triglycerides wuxuu u kala baxaa asiidh dufan ah oo bilaash ah (FFAs) iyo glycerol kuwaas oo loo isticmaalo ilaha tamarta. foosha supramaximal ee degdega ah waxay kordhisaa sii deynta epinephrine taas oo kicisa saameyn cascade taasoo keenta lipolysis supramaximal ee unugyada baruurta. Sababtoo ah kicinta ayaa sidaas ah. soo noqnoqda oo xoog leh, jawaabta lipolytic waa xad-dhaaf ah FFA-yaduna waxay bilaabaan-urursi xad-dhaaf ah oo ku jira adipocytes. FFA-da qulqulaya waxay sababtaa cillad unugga iyo kicinta dhimashada unugyada apoptosis-programmed.
Lipozero Multipolar rf vacunm Mashiinka Jidhka Slimming ee ugu cusub
Farsamada RF, iyadoo lagu dabaqay dhaq-dhaqaaqa kiliinikada ee Waqooyiga Ameerika muddo dhowr iyo toban sano ah, waa badbaado la aqoonsan karo, wax ku ool ah oo aan ahayn qaliin iyo farsamo isqurxinta hal-abuurnimo oo caafimaad.
Velashape 3 Vacuum Roller Slimming Machine loo isticmaalo jirka iyo wejiga oo dhan
Aragtida daawaynta waa habraac aan fiicneyn oo adeegsada nuugista daloolka vacuum si kor loogu qaado epidermis, maqaarka iyo dufanka subcutaneous, ka dibna isku dara oo fidiya unugyada isku xiran ee kiltex kala duwan, kaas oo si wax ku ool ah u burburin kara dufanka subcutaneous oo tuujin karaa xididdada dhiigga. iyo dardar-shiid kiimikaadka nudaha afar jeer.Unugyada dufanku waxay sidoo kale noqdaan asiidh dufan ah ka dib jimicsi aan caadi ahayn, waxayna ka soo baxaan jidhka nolol maalmeedka, si ay u gaaraan saamaynta miisaan lumis.